Minisiteran’ny Serasera : « Efa rava…, tsy misy intsony izany MBS izany » -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisiteran’ny Serasera : « Efa rava…, tsy misy intsony izany MBS izany »
30/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra fanazavana mahakasika ny fitakiana ataon’ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, amin’ny fisokafan’ny haino aman-jery MBS ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Serasera, Guy Laurent Ramanakamonjy. Nambarany fa tsy misy intsony ary efa rava tanteraka ny MBS. Noho izany, tsy mitombina ny fitakiana ataon’izy ireo ary tokony hiandry ny didy avoakan’ny Fitsarana… Resadresaka
Gazety Triatra (+): Andriamatoa tale jeneraly, miteraka resabe ary anaovan’ny sasany fanahy iniana hoenti-manakorontana eto amin’ny firenena ny fitakiana ny fisokafan’ny haino aman-jery MBS. Afaka mba hazavainao ve ny mahakasika sy ny mombamomba io haino aman-jery io, amin’izao fotoana?
Guy Laurent Ramanakamonjy (-): Marina tokoa izany! Voalohany indrindra aloha, tsy tokony hasiana teritery politika ilay fitakiana. Eny, hatramin’ny mpiasan’ny minisitera aza mantsy hanaovan’ireo mpitaky fampitahorana sy ramatahora. Manaraka izany, aleo hazava tsara amin’ireo mpanao fitakiana sy manao teritery politika fa efa rava tanteraka ary tsy misy intsony izany MBS izany. Marihina fa ry zareo tompony sy mpitantana ihany no nanao ny faharavan’io haino aman-jery io, ny 20 Febroary 2009. Ankoatra izay, tsy misy intsony ny MBS eo anivon’ny fitantanan-ketra. Etsy andaniny, tsy nandoa hetra intsony koa izy ireo koa ahoana no ahafahany manokatra indray io haino aman-jery io. Manampy izany, efa eny amin’ny Fitsarana ihany koa ny raharaha mahakasika izany. Noho izany, avelao ny Fitsarana hanao ny asany an-kalalahana. Eo ihany koa ny tsy maha ara-dalàna ny mombamomba azy rehetra ao amin’ny “registre de commerce”. Etsy andaniny, ny minisitera koa mbola tsy mamoaka “licence” amin’izao fotoana izao. Farany, ny fitondrana Tetezamita ihany koa no nanafoana io fangatahana fisokafana io.
(+) Manao ahoana indray àry ny mikasika ny lalàn’ny fifandraisana eto amintsika? Ohatry ny mbola miteraka olana ihany koa izy io hatramin’izao?
(-) Efa eo ampiresahana an’io lalàn’ny fifandraisana eto Madagasikara io mihitsy amin’izao fotoana izao ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana sy ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka rehetra. Efa voadinika, araka izany, ny fananganana ilay toerana fakan-kevitra (espace de concertation) hamariparitana tsara ny mety ho firafitr’ilay lalàna. Eo ihany koa ny fijerena manokana ny fangatahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) amin’ny hoe: ekena ilay lalàm-pifandraisana fa ireto koa tsy maintsy jerena akaiky ny mikasika azy. Eo ihany koa ny fangatahana hafa, sns. Maro dia maro ny mbola dinihina amin’io lalàm-pifandraisana io satria mbola hodinihina ny fomba hampiharana sy ny fomba fametrahana azy. Eo ihany koa ny fandinihina ny fananganana lalàna mikasika sy mahakasika ary mifehy sy miaro ny holafitry ny mpanao gazety. Jerena ihany koa ny lalàna mifehy ireny fampitam-baovao amin’ny “internet” ireny, sns. Izany rehetra izany dinihina amin’ilay toerana fakan-kevitra avokoa. Aorian’izay vao mandrafitra ilay lalàna rehetra ary hatolotra holanian’ny eny amin’ny parlemanta. Isika ihany koa mantsy mila manova ilay lalàm-pifandraisana teo aloha satria efa tsy mifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny intsony izany, efa antitra loatra ilay lalàna teo aloha.
(+) Ary afaka hazavainao ve ny andraikitra tena sahanin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana?
(-) Eny, mizara roa miavaka tsara ny andraikitra sahanin’ny minisitera. Eo ny mikasika ny serasera fotsiny ary eo koa ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana. Ho an’ny serasera manokana, manao ny fanapariahana, fampanarahan-dalàna ary ny fametrahana ny lalàn’ny fampahalalam-baovao eto Madagasikara. Manao ny fampitam-baovaom-panjakana amin’ny vahoaka amin’ny alalan’ireo haino aman-jery miankina na tsia amin’ny fanjakana. Eo koa ny fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety ary manao ny serasera amin’ny fampandrosoana ihany koa. Ankoatra izay, mikasika ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana indray, ny minisitera no manao ny fampifandraisana ireo andrim-panjakana rehetra eto Madagasikara. Izany hoe, manao ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny samy andrim-panjakana ny minisitera. Etsy andaniny, misolo tena ny governemanta eo anivon’ny parlemanta ihany koa izy amin’ny adihevitra izay atao sy misy eny amin’ireo Antenimiera roa.